गोर्खाली सैनिकले जन्मभूमीप्रति गद्धारी गर्ने कुरा सोच्नै सकिँदैन - Narayanionline.com Narayanionline.com गोर्खाली सैनिकले जन्मभूमीप्रति गद्धारी गर्ने कुरा सोच्नै सकिँदैन - Narayanionline.com
गोर्खाली सैनिकले जन्मभूमीप्रति गद्धारी गर्ने कुरा सोच्नै सकिँदैन
म भारतिय सेनामा काम गर्छु । तर यो होइन कि मलाई नेपालको भन्दा भारतको बढी माया छ । नेपाल आमाको छोराले यस्तो कदापी सोच्न सक्दैन् । म लगायत हजारौं भारतीय गोर्खाली फौजको मन यस्तै होला र हुनु पनि पर्छ । यी सबै गोर्खा फौज नेपाल भारत सन्धि सम्झौताकै अनुरुपका हुन् । लाखौ युवा बिदेश पलायन भए जस्तै हो भारतीय सेनाको जागिरमा नेपाली युवाहरु होमिनु भनेको ।
भारतले कालापानीमा सेना परिचालन गरेको छ, त्यो पनि ‘गोर्खा राईफल्स’का नाममा भर्ती गरिएका नेपालीहरुलाई । देशका नागरिकहरुलाई विदेशीका लागि भाडामा प्रयोग गर्न स्वीकृती दिने दलाल नीतिको नतिजा अब देखिंदैछ । नेपालका विरुद्धमा नेपालीहरुलाई लडाउने घृणित रणनीति बुनिदै छ । तर गोर्खा राइफल्सले आफ्नो जन्मभुमी प्रती कदापी गद्वार गर्ने छैन ।
मैले पढेको भुगोल बिषयमा नेपाल भन्दा भारत २२ गुणा ठुलो छ, चीन ६६ गुणा । भारतको उत्तरी भागमा पाकिस्तान पर्छ जसलाई ईन्डियाले छिमेकी दुस्मन मान्छ । यो दुई देश बिच सम्बन्ध सधै विग्रेको हुन्छ । यधपि बाहिर अरुले सुमधुर देख्न सक्छन ।
भारतले आफ्नो सिमा रक्षाको लागि लाखौ फौज सिमामा खटाएको छ चौबीसै घण्टा तैनाथ राख्छ । अझ भनौ माइनस २० डिग्री सेल्सियस तापमान हिमाली इलाकामा पनि सेना तैनाथ छ र यो सम्भब पनि भएको छ ।
यदि नेपाल भारत बिच सेनाको संख्या तुलाना गर्ने हो भने नेपालमा करिब १ लाख सेना छ भने भारतमा करिब २२.५ लाख सेना छन् । भुगोलको हिसाबले हेर्दा झण्डै बराबर देखिन्छ । किनकी नेपाल २२ गुणा सानो छ ईन्डिया भन्दा भौगोलिक बनावटले ।
हामिले निकै सुनियो भारतले सिमा मिच्यो भनेर, र हामिले सहि सुन्यौं पनि । यसको घोर भत्र्सना गर्नै पर्छ हरेक नेपालीले । तर मलाई एउटा सवाल आउँछ नेपालले सेनालाई बिबादित सिमामा किन खटाउन सकेन ? या किन चाहेन ? यदि सिमामा आफ्नो सिमा रक्षाको निम्ति खटाईन्थ्यो भने सायदै आउथ्यो यो अहिलेको विवाद ? कुरा उठ्न सक्छ शक्तिशाली देशसङ्ग लड्न सकिन्न भन्ने । यो हुनै सक्दैन । शक्तिशाली देश मान्ने हो भने संसार भर एउटै होला जुन अमेरिका देखिन्छ यतिबेला । के अरु कुनै देशले सिमा रक्षाको लागि सेना तैनाथ गर्दैन सिमामा.? पक्कै गर्छ । के नेपालले गरेको छैन त ? सायद गरेको होला । गरेको भए खोइ सिमा रक्षा ? हामिले कहिले सुनेका छौ नेपाल भारत सिमामा सेना बिच यस्तो मुद्दा भयो भनेर ? नगरेको भए किन गरेन नेपालले ? यतिबेला यो प्रश्न तपाईं हामि सबै सच्चा नेपालिको मन भित्र उब्जिरहेको हुनुपर्छ ।